အထိန်းသိမ်းခံရသူစာရင်းပေါက်ကြားမှု​ကြောင့် ဝီဂါလူမျိုးစုတွေအပေါ် တရုတ်အစိုးရကဖိနှိပ်​နေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲမှု​​​ေတွပုိမိုခိုင်မာလာ “ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အထိန်းသိမ်းခံရသူများရဲ့လျှို့ဝှက်စာရင်းကြောင့် ဝီဂါလူမျိုးတွေအပေါ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေခဲ့” December 10 , 2020 တရုတ်ပြည်ရဲ့စင်ကျန်းဒေသမှာ ဝီဂါလူမျိုးနွယ်စု၂၀၀၀ကျော် ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ လျှို့ဝှက်စာရင်းပေါက်ကြားမှုဟာ ဝီဂါလူမျိုးတွေကို အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင် ဆန်စွာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းဖို့ ကျယ်ပြန့်တဲ့အချက်အလက်စုဆောင်းမှုစီမံချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာ ဖော်ပြနေပါတယ်လို့...
“အိုဟိုင်းယိုး ပြည်နယ်မှာ အမဲလိုက်နေစဉ် ဖခင်ဖြစ်သူက သားကို သမင်နဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မိ” December 11, 2020 အသက်၂၈နှစ်အရွယ် အိုဟိုင်းယိုးနယ်သားတစ်ဦးဟာ မိတ်ဆွေများနဲ့အမဲလိုက်ခရီးစဥ်သွားရင်း ညနေဆည်းဆာချိန်မှာ သူ့ဖခင်က သူ့ကို သမင် တကောင်လို့ ထင်မိတာကြောင့် သေနတ်နဲ့ အသေပစ်ခတ်လိုက်တာခံခဲ့ရပါတယ်။...
“ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးတဲ့နောက်မှာ နှာခေါင်းစီးမျက်နှာဖုံးမတပ်ဆင်တော့ပဲနေလို့ရနိုင်လား”
“ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးတဲ့နောက်မှာ နှာခေါင်းစီးမျက်နှာဖုံးမတပ်ဆင်တော့ပဲနေလို့ရနိုင်လား” December 11 , 2020 ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာ နှာခေါင်းစီးမျက်နှာဖုံးမတပ်ဆင်တော့ပဲနေလို့ရနိုင်လား? ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရရင် မရဘူး လို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာ နှခေါင်းစီး မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်တာ နဲ့ တယောက်နဲ့တယောက်အလှမ်းကွာအောင်နေထိုင်ခြင်း (Social...
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် ဟိုက်ဒြာဘတ်မြို့ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု သွားရောက်လေ့လာ
နိုင်ငံတကာသတင်း , December 11, 2020
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဟိုက်ဒြာဘတ်မြို့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု လေ့လာရေးခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ခြင်း (၉-၁၂-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးဒေလီ) ၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်သည် ၉-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ နယူးဒေလီမြို့ရှိ သံရုံးအကြီးအကဲများအတွက် စီစဉ်သော...
“လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးတပ်သားများ တင်ဆောင်လာတဲ့ရဟတ်ယာဉ် ပြင်သစ်ပြည် အဲ့လ်(ပ်)တောင်တန်းပေါ်ပျက်ကျ”
နိုင်ငံတကာသတင်း , December 10, 2020
“လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးတပ်သားများ တင်ဆောင်လာတဲ့ရဟတ်ယာဉ် ပြင်သစ်ပြည် အဲ့လ်(ပ်)တောင်တန်းပေါ်ပျက်ကျ” December 9, 2020 အင်္ဂါနေ့က လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးတပ်သားများကို တင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစီး အဲ့လ်(ပ်)တောင်တန်းပေါ်ပျက်ကျခဲ့လို့လူ၅ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ၊ဆဌမလူဟာဒါဏ်ရာရထားပြီးအသက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူယယ် မက်ခရွန်ကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီရဟတ်ယာဉ်ဟာ လေ့ကျင့်ရေးခရီးစဉ်မှာ လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ကိုတင်ဆောင်ပျံသန်းလာရင်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်၁၈၀၀မီတာ(၅၉၀၉ပေ)အမြင့်ကနေ အောက်ကိုထိုးကျ...
“အာဂျင်တီးနား လွှတ်တော်မှာ မာရာဒိုနာပုံနဲ့ ငွေစက္ကူထုတ်ဖို့ အဆိုတင်”
“အာဂျင်တီးနားဆိနိတ် လွှတ်တော်က မာရာဒိုနါရုပ်ပုံနဲ့ ငွေစက္ကူထုတ်ရန်အကြံပြု December 9, 2020 အာဂျင်တီးနားဥပဒေပြုလွှတ်တော် အမတ်တယောက်က အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံးကြယ်ပွင့် ဒီယေဂို မာရာဒိုနါပုံ နဲ့ ငွေစက္ကူအသစ်များရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖို့အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကို ၁၉၈၆ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ့ဖလားရရှိအောင် ဦးဆောင်ပြီး ကစားပေးနိုင်ခဲ့သူ မာရာဒိုနါဟာ...
ရှားပါးအဖြူရောင်သစ်ကုလားအုတ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တကောင်ထဲသာကျန်ရှိ
နိုင်ငံတကာသတင်း , December 09, 2020
“ကမ္ဘာမှာတကောင်ထဲရှိတော့တယ်လို့ထင်ရတဲ့သစ်ကုလားအုပ်ကို ခြေရာခံစံနစ်ပါဝင်တဲ့ကရိယာတပ်ဆင်” December 9,2020 ကင်ညာအရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ သီးသန့်တနေရာမှာ ထားရှိတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တကောင်ထဲသာရှိတော့တယ်လို့သိထားတဲ့ အဖြူရောင်သစ်ကုလားအုတ်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခိုးယူမဲ့သူများရဲ့ ဘေးအန္တရယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက် GPSခြေရာခံကရိယာတပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူများက ပြောဆိုပါတယ်။. တကောင်ထဲသွားလာနေတဲ့ သစ်ကုလားအုပ်ထီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို အချိန်...
“ပြင်သစ် သမ္မတ မက်ခရွန် နဲ့ အီဂျစ်သမ္မတ စီစီတို့ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ”
“ပြင်သစ် သမ္မတ မက်ခရွန် နဲ့ အီဂျစ်သမ္မတ စီစီတို့ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ” December 8, 2020 ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်က အီဂျစ်သမ္မတ စီစီကို ပြင်သစ်ပြည်ကို နိုင်ငံတော်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်လာရောက်စဉ်အတွင်း တနင်္လာနေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး၊လစ်ဗျားနိုင်ငံကပဋိပက္ခများ နဲ့အခြားသောဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအထားအာရုံစိုက်အလေးပေးပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲသူတွေကို...
နိုင်ငံတကာသတင်း , December 08, 2020
🇬🇧 ယူကေနိုင်ငံမှ အသက် ၉၀ ရှိ ဖွားဖွား Margaret Keenan ဟာ #ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ဆေးကိုစတင်ထိုးနှံသူဖြစ်လာပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုမှာထိုးနှံတာခဲ့တာကလွဲလို့ လူအများကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အဖြစ် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကို စတင်ထိုးနှံတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုကာကွယ်ဆေးပထမဦးဆုံးအဖြစ်အထိုးခံရတာကို မယုံနိုင်ပါဘူးတဲ့။ “It’s...
နိုင်ငံတကာသတင်း , December 07, 2020
“သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရှေ့နေ ဂီအူလီယာနီ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်နေ” December 7, 2020 သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရှေ့နေကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ ထရမ့်က တနင်္ဂနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနယူးယော့ခ်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းဟာ နိုင်ငံအနှံ့လှည့်လည်ပြီး ရီပတ်ဘလီကန်ရှေ့နေ တွေကို သမ္မတရော်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ...
« Previous 1 …67 8910 11 12 … 40 Next »